That's so good, right?: Heaven (Ending)
အိစက်နေတဲ့အိပ်ယာရဲ့အတွေ့မှာမျောပါနေတုန်း ခပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်မှုအနေအထားကြောင့်ရော အသံတစ်ချို့ကြောင့်ပါ ကျွန်တော်နိုးထလာရပါတယ်။ ကျွန်တော်နိုးလာတာကိုသတိပြုမိတဲ့ Staci က ကျွန်တော့်လက်ကိုအသာလှမ်း ဆွဲကိုင်လိုက် ရင်း 'come on and join us' ဆိုတဲ့အပြောနဲ့အတူ နှုတ်ခမ်းအိထွေးထွေးနဲ့ နမ်းစုပ်မှုကိုခံလိုက်ရပါသည်ကော။ သူမ အနမ်းကို ကြာရှည်မရလိုက်ပါဘူး။ သူ့ယောက်ျားဘက်ပြန်လှည့်သွားရင်း French kiss နမ်းနေကြတာ အချိန်အတော် ကြာတယ်။
သူတို့ကိုကြည့်ရင်းငေးနေတဲ့ နေရာမရဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို လက်နဲ့အသာဆွဲကိုင်ကာ သူ့နို့သီးခေါင်းဆီ နေရာချပေးရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းများကတော့ Ray ရဲ့နှုတ်ခမ်းများဖြင့် သော့ခတ်ထားလျက်။ အိုး...အားရစရာကောင်းလိုက် တာ ပေါက်စီအကြီးကြီးတွေ၊ နို့သီးခေါင်းတစ်ဖက်ကို အသာလျှာနဲ့ကလိရင်း အခြားတစ်ဖက်ကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဖြည်း ဖြည်းညှစ်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာ။
'Mmmmmmm… your mama must have hadahard time weaning you,'
Ray နဲ့ နှုတ်ခမ်းဂဟေဆက်ရာကနေ ကျွန်တော့်ကလိမှုကို အားပေးလာတာကြောင့် ပိုကြိုးစားမိရတာ 'ရှလွတ်...ရှလွတ်'။ ကျွန်တော့်လျှာဖျားတွေက နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိတာသာမက ငုံစုပ်မိတာကြောင့် Staci ဖီးလ်အရမ်းလာတာသေ ချာတယ်။ Ray ကလည်း အားကျမခံဘယ်ဘက်က နို့သီးခေါင်းကို ကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်ပြုစုတော့တာပေါ့။ ပါးစပ်ကညည်း တွားသံတွေထွက်လာသလို ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း လူးလွန့်ကာ အားကိုးအားထားအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ဒစ်တွေကို လက်နှစ် ဖက်ဖြင့် အသေဆုပ်ကိုင်ထားသပေါ့။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာ Staci က Ray ရဲ့ Dick ကိုငုံစုပ်နေသလို Rayကကျွန်တော့် Dick ကို အားရပါးရစုပ်ပြုပေးရင်း ကျွန်တော်ကလည်း Staci ရဲ့ Dick အသေးစားအစိလေးကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လျက် ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေေ၀ဖြစ်ကရော။
Staci ကသူမအပိုင် Rayရဲ့ Dick ကို အစွမ်းကုန်ပြုစုနေတာကို မျက်စိနဲ့နည်းယူမှတ်သားရတာပေါ့ဗျ။ ထိပ်ဖျားလေးကို လျှာနဲ့ကလိလိုက်၊ ကွမ်းသီးခေါင်းကိုငုံစုပ်လိုက်၊ ခေါင်းကိုခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားကာ အဆုံးထိသွင်းလျက် တစ်မျိုး အိုး...မိုက်မှမိုက်။ Ray ကလည်း တစ်မျိုး ခပ်ရွရွလေးတစ်ကယ့်ကို ရွရွလေး ကျွန်တော့်ဒစ်ကိုစုပ်နေတာ ကျွန်တော်လေ ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ကလေးငယ်လေးရဲ့ ဒစ်အသေးစားလေးအတိုင်း ပြူးနေတဲ့ Staci အစိလေးကိုကျွန်တော် လျှာဖျားခပ်မာမာလေးနဲ့ ကလိသလို ငုံငုံစုပ်မိတာ မိနစ်အတော်ကြာပါတယ်။ လက်ခလယ်ကိုသုံးလို့ အတွင်းသားဆီကိုလည်း ရှန်တိန်တစ်ပြိုင် တည်း ကစားမိတာလည်းရှိတယ်၊ဗီဒီယိုကားတွေထဲကအတိုင်း ထပ်တူဖြစ်စေရမယ်လေ။
'ရှိး...အ.အ' Rayကရှလွတ်ကနဲနေအောင် သူ့ပါးစပ်ထဲ My dick စုပ်သွင်းလိုက်တာ 'အားပါးပါး'.
လက်ခလယ်ကို ခပ်သွက်သွက် အသွင်းအထုတ်လည်းလုပ်ပေးနေတာကြောင့် Staci ရဲ့အတွင်းသားတွေဟာ ရှုံ့ပွရှုံ့ပွဖြစ်ကာ အရည်ကြည်တချို့ထွက်လာတော့တယ်။ အဲဒါကလည်း ကျွန်တော်ဖီးလ်ကောင်းသွားချိန်နဲ့ မရှေးမနှောင်းပါ။ ဒီအချိန်လေးမှာ မိုးပေါ်ကသိကြားမင်းက ဆက်မလုပ်ဖို့ ဆင်းတားတောင်မရတော့ပါဘူး။
Ray ခေါင်းဟာလည်း ခပ်သွက်သွက် အထက်အောက် ရွေ့လျားနေသလို သူ့လျှာဖျား၊ နှုတ်ခမ်းများဟာလည်း ကျွန်တော့် Rock တံကြီးကို ရစ်ပတ်လိုက် မျိုချလိုက် အသွင်းအထုတ်ကစားပေးတာကြောင့် Staci ရဲ့အစိကိုမစုပ်ပေးနိုင်တော့ဘဲ အိပ်ယာပေါ်လဲလျောင်းပြီး ဖီးလ်တက်ရပါပြီ။ 'အား...အား ..အ'
ထို့အတူ Stici ရဲ့စုပ်ယက်ပေးမှုကြောင့် Rayရဲ့ Rocket ကြီးဟာ အဆမတန်ထောင်မတ်နေတာ မိုးပေါ်ပစ်လွှတ် တော့မယ့်အတိုင်း။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း သူမရဲ့ယောက်ျားကို ပြုစုနေတာဟာ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို သူလာပြီးပြုစု နေတယ်လို့ စိတ်ထဲထင်လာမိတဲ့အထိစွမ်းပါတယ်။
'Oh! Oh…hhh! My God!'
ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မထိန်းတတ်သေးပါဘူး။ တပ်ထွက်တော့လည်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အထာတော့မကျသေးဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ လျှာတွေ အာတွေ အစုပ်အယက်တွေ အရမ်းကိုကောင်းတာကြောင့် Ray ရဲ့ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်မိပြန်တာလေ။ ထွက်သွားပေမယ့် မပျော့သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူဆက်ပြီးစုပ်နေသေးတာပျော့သွားတဲ့အထိ။ အသက်ကို ပုံမုန်ရှူ ပြီးတော့ ဘေးကို စောင်းပြီး အမောဖြေရတယ်။
'He's even better fresh from the spout,'
Ray ကအပြုံးတစ်ချက်ပြုံးရင်း ကျွန်တော့်ကိုမှတ်ချက်ချပါရဲ့။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ချွေးတွေထွက်စပြုရင်း ကြွက်သားတွေ လည်း အမြှောင်းကိုထလို့ပါပဲ။ Staci ကဒူးနှစ်ဖက်ကိုကွေး သူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ထားလိုက်ပြန်တော့ Rayက အဆင်သင့်နေရာယူ pussy နှုတ်ခမ်းသားလေးကို အသာဖြဲကာ Rocket ကြီးကို တထစ်ချင်းတွင်းအောင်းတော့တာပါပဲ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် တင်ပါးတွေကို ဇကောဝိုင်းလုပ်လိုက်နဲ့ ကြည့်သူ ကျွန်တော်ဖြင့် ရင်တွေတောင် ပြန်လုန်လာတယ်။
Ray တစ်ယောက် ခုတင်ဘေးစားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ KY Jellyကိုယူ သူ့အတံပေါ်ညှစ်ချရင်း ဆောင့်ချက်ကို အရှိန်မြှင့် ပါတော့တယ်။
'Ommmm.. I'm Cumming, baby. I'm Cumming….."
Staci ရဲ့ညည်းတွားသံကြောင့် Rayရဲ့ဆောင့်ချက်တွေဟာ နှေးမသွားပါဘူး။တင်ပါးကျစ်ကျစ်တွေကို အားယူရင်း အသားကုန် ဆောင့်နေတော့တာဗျ။
ရုတ်တရက် အသာငေးကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို Staci အသာဆွဲကိုင်ကာ သူ့ရဲ့နို့သီးခေါင်းစီနေရာချ စုပ်ပြုခိုင်းပါရဲ့။ ဘာရမလဲ ပေါက်စီတွေကို ညှစ် နို့သီးခေါင်းကိုစုပ်လိုက်တာ သူမရဲ့ဖီးလ် ကိုပိုမြှင့်လိုက်သလိုဖြစ်သပေါ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူမရဲ့ ချက်ပေါက်လေးတွေ ဆီးစပ်မွှေးလေးတွေကို လျှာဖျားလေးနဲ့ကလိ Rayရဲ့ Rockတံကြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်နေ တဲ့ အပေါက်ဝက အစိလေးကိုလည်း ငုံစုပ်မိရတော့ အနံ့တစ်မျိုးကိုရတာ စိတ်ကိုပါကြွစေလိုက်တာများ 'ဂလု' ။
'Ever taste can't juice, Alex?'
Ray ရဲ့အမေးကို မဖြေမိပဲ စုပ်ယက်နေမိတဲ့ အချိန် သူ့ Rocket ကြီးကို Staci's pussy ထဲက စွဲနှုတ်ကာ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ ရုတ်တရက် ထိုးထည့်ပေးတာမှာ လန့်ပြီး ပါးစပ်ဟလိုက်မိပြန်တော့ လည်ချောင်းထဲတောင် လျောကနဲ ၀င်သွားရပါတယ်။ အသက်မနည်းရှူပြီးငြိမ်နေမိတာကြောင့် ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ အထုတ်အသွင်းသွက်သွက်လုပ်ဖို့ Staci ညွှန်ကြားတယ်လေ လက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုဖိဖိပြီးပေါ့။
မျက်စိရှေ့မှာ လတ်တလောမြင်ထားတာရော ဗီဒီယိုတွေကြည့်ထားတာကြောင့် သိနေတာတွေရော အခု Rayရဲ့ငပဲကို စုပ်မှုတ်ရာမှာ ကျွန်တော်သုံးပါတော့တယ်။ ခေါင်းကိုခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားရင်း ပါးစပ်ထဲအသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက် အောက်ခြေထိအောင် အာခေါင်ထဲထိမျိုလိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းကို ငုံပေးလိုက် စသဖြင့်ပေါ့။
'Oh, geez!' 'This kid'sanatural-born cocksucker!'
'၀ူး' ခပ်ထွားထွားအသားဆိုင်ကို ကျွန်တော်စုပ်မျိုနေစဉ်မှာပဲ Staciက သူ့အစိလေးကို လက်နဲ့အသာပွတ်ပြီး ဖီးလ်ယူ နေသလို သူ့မျက်လုံးတွေက အရောင်တွေတောက်လို့။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်တစ်ခုလုံးလည်း ရွှေနီငှက်ပျောသီးကြီးက အပြည့် နေရာယူထားတာပေါ့။
'I'm about to cum!'
'This kid's about to blow my wad!
Ray အသည်းခိုက်နေပြီ ကျွန်တော့်ပြုစုမှုကိုလေ။ သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် his rocket အာခေါင်ထဲရောက်ရောက် လာတာ အသက်ကို မှန်အောင်ရှူရတယ် ကျွန်တော့်မှာ။
'In me, Ray!' ' Cum in me'
သူ့မိန်းမရဲက အမိန့်အတိုင်းပါပဲ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး အရည်တွေရွှဲနေတဲ့ အပေါက်ထဲကို ထိုးထည့် လိုက်တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ Rayရဲ့ဆောင့်ချက်တွေဟာ လှေလှော်သမားတွေလို ရှေ့ထိုးနှောက်ငှင် ခပ်ပြင်းပြင်းလှော်ခတ်သလို Staciရဲ့ဗိုက်သားတွေဟာ ရေပြင်အလား လှိုင်းထနေပါပြီ။ နှစ်ဦးသားပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အတိုင်း တက်ညီလက်ညီ ခပ်ပြင်းပြင်း လှော်ခတ်နေကြတာ သူတို့ပါးစပ်ကညည်းတွားသံများဟာ chorusတွေလိုပဲ၊ သူတို့အရှိန် မြင့်သံ တက်ကျသံတွေဟာ ဟာမိုနီကို မိလို့။ ကကျွန်တော့်ကိုလည်း အနားမပေးချင်ဘူး ကျွန်တော့်မျက်နှာကို သူ့ဆီ ဆွဲယူရင်း နှုတ်ခမ်းတွေကို ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက်စုပ်ယူနမ်းလိုက်ရင်း ပြီးတော့တစ်ခါ သူ့မိန်းမပေါင်ကြားဆီ မျက်နှာမူ စေတော့တယ်။
Staciရဲ့ဗိုက်သားလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် အသာတို့ထိရင်း ထန်းလျက်ခဲဆီလျှာနဲ့ကလိရပြန်ပေါ့တစ်ခါ။ ရွှေနီကြီးက အသွင်းအထုတ်လုပ်နေသလို Staci ကလည်းပြန်ပြီး နောက်ပြန်ဆောင့်နေတာ အရည်ကြည်တွေဟာ ကျွန်တော့်လျှာဆီ ငံကျိကျိအရသာတွေပေးပါတော့တယ်။ ထိုစဉ်ခဏ ကျွန်တော့်နောက်ဘက်ကို Rayနေရာရွှေ့ကာ ကျွန်တော့်တင်ပါး တွေကို အသာဖျဲ သူ့လျှာကိုအရှည်ကြီးထုတ်ကာ အလျားလိုက်ကလိပါတော့တယ်။ ဘယ်လိုဖီးလ်ကြီးလည်း အား....ဘယ် လို...ဘယ်လို ဖီးလ်မှန်းမသိပေမဲ့ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။ အပေါက်ဝလေးကို ကလိတယ်၊ တင်ပါးတွေကို သွားနှင့်ခပ်ဖွဖွ ကိုက်တယ် အိုး..... ဖီးလ်အရှိန်အရမ်းမြင့်လာတာကြောင့် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ Staciရဲ့အစိလေးကို အားရပါးရစုပ်ယူ ကလိမိရပါပြီ။
'Oh, honey…..the kid can suck pussy, too!'
မိန်းမူးနေတဲ့ခဏ အာရုံေ၀၀ါးနေတာ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသွားပါတယ်။ သတိမူမိချိန်မှာတော့ တစ်ဝက်မာနေတဲ့ သူ့ဒစ်ဖြင့် ကျွန်တော့်ခရေ၀လေးကို အပေါက်ချဲ့စပြုနေတဲ့ ရဲ့ကြိုးစားမှုကို တန်းပြီးခံစားရတော့တာပဲ။ ထိပ်လေးကို သွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်ကစားနေတာမှာ သူ့ဒစ်က အရမ်းမမာနေလို့တော်ပါသေးရဲ့။
Rayသူ့ဒစ်မှာ သုတ်လိမ်းကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲနှဲ့ပြီးသွင်းချလိုက်ပါတယ်။ အစပိုင်းကတော့ဖြည်းဖြည်းပေမယ့် နည်းနည်းကြာလာတော့ သူ့ဆောင့်ချက်တွေ သွက်လာပါတော့တယ်။ တစ်ချက် တစ်ချက် ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်လျှာများဟာလည်း Staci's pussy ထဲလျှောကနဲ လျှောကနဲပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ မခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဖီးလ်မျိုး အခုခံစားနေရပါပြီ။ ခပ်မိုက်မိုက်စုံတွဲမှာ ယောက်ျားလုပ်သူရဲ့ဆောင့်ချက်တွေခံယူရင်း မိန်းမလုပ်သူရဲ့ အသားနုတွေ ကိုစုပ်ယူမိနေတဲ့ဖီးလ်လေ။
'He's gonna make me cum again, Ray!'
'I'm there too, baby!'
တင်းပြီးကျစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို အသေအချာကိုင်ပြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတာ ခုတင်ကြီးကို လှုပ်ရမ်းနေလို့ပါပဲ။ Staciလည်းကျွန်တော့်အလျက်ခံယူရင်း သူ့ဘာသာအစိကို ကလိလျှက် climaxရောက်ဖို့လုပ်သလို Rayလည်း အသက်ရှူသံလှုပ်ရှားမှုဆောင့်ချက်တွေကအပြင်းထန်ဆုံးတွေဖြစ်လာပါပြီ။ ကျွန်တော်လည်း အသားထဲက ဘယ်လိုလှုပ်ရမ်းမှုတွေလည်းမသိ နာကျင်မှုတွေမသိ ဖီးလ်အရမ်းကောင်း...ကောင်းလာပြီ...အ...အ..အား။ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်ဖြစ်မှု မွှေချက်ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ အရမ်းကောင်းသွားသလို Staciလည်းတွန့်လိန်ကောက်ကွေး အို..အို့အား အားတွေ ဖြစ်လို့။
ကျွန်တော့်ခရေတွင်းထဲက Rayရဲ့ငပဲကြီး တဖြည်းဖြည်းထုတ်ချိန်မှာတော့ ရင်ထဲ ဟာကနဲခံစားလိုက်ရပါတယ်။ နာတာလား....ထပ်လိုချင်သေးတာလားမသိတဲ့ တစ်မျိုးသောခံစားချက်ပါ။
ခဏအကြာ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသွားချိန်မှာတော့ သုံးဦးသား အိပ်ယာပေါ်မှာငြိမ်သက်သွားကာ အနားယူမိကြ ရပါတော့တယ်။ ခြေကုန်လက်ပန်းကျပေမဲ့ ကျေနပ်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲ ကစားပွဲလေးပေါ့။
'ဒေါင်...ဒေါင်' ဆိုတဲ့ သုံးနာရီထိုးတဲ့တိုင်ကပ်နာရီသံကြောင့် သုံးယောက်အတူရေပန်းအောက်မှာ ရေချိုးသန့်စင် ခဲ့ကြပါ တယ်။ Rayဟာကျွန်တော့်ကိုအနမ်းများစွာပေးသလို ညီငယ်လေးလို ကလေးတစ်ယောက်လို ဆပ်ပြာတိုက်သန့်စင် မှုကို လုပ်ပေးပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ အနည်းငယ်ပျော့နေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အာငွေ့ပေးရင်း ခြောက်သွေ့မှုပေးပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ပါးစပ်ထဲ စိုစွတ်မှုကိုဖြစ်စေလိုက်ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့သုံးကြိမ်မြောက်ဆိုပါတော့။
ဟိုးရေကူးကန်ကြီးကိုစီးမိုးမြင်နေရတဲ့ Rayတို့အခန်းက အခုတော့ ပြတင်းပေါက်လိုက်ကာတွေဖွင့်ပြီ။ Staciလည်း မီးဖိုချောင်ထဲရောက်ပြီ၊ ကျွန်တော်ကတော့ Rayရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာနွေးနွေးထွေးထွေးစကားအတန်ကြာပြောနေဖြစ်ပြီပေါ့။ အံ့သြကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ နေ့လည်ခင်းအခါသာမယလေးကို ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါပဲ။
ဓာတ်လှေကားနဲ့အသာဆင်း တံခါးဝအထိ နေ့အလင်းရောင်နှင့်အတူ လိုက်ပို့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ဖို့အချိန် နည်းနည်း နောက်ကျနေပေမဲ့ ခါတိုင်းလည်း နေပိုင့်အိမ်ကိုဝင်နေကျဆိုတော့ အိုကေပါတယ်။
တံခါးမကြီးကနေ အသာထွက် အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ Staciက ပြတင်းပေါက်ကနေ လက်ပြနှုတ်ဆက်နေ တာတွေ့ရပေါ့။ ဟင်း….ဟင်း..ကြိုက်သွားပြီ bi sex လုပ်ရတာကို။
အိုး…'that's one of wonderful afternoon in heaven.'
You can also read at http://mycutestories.blogspot.com